Adolfo Dominguez anopa imba nyowani yekutsikisa: El lino | Bezzia
Adolfo Dominguez anopa imba nyowani yekutsikisa: El lino
Maria vazquez | 05/05/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Mucheka unoita chinzvimbo chikuru mu mutsva muunganidzwa naAdolfo Domínguez. Zvikuru zvekuti iyo femu haina kuzeza kupira mupepeti iwo watinogovana newe nhasi. Kana, sezvazvinoitika mumawadhi edu, jira iri harisi kushomeka mune rako panguva yezhizha, tsvaga zvarinotaura nesu!
Iyo fiber ine tsika huru Muzhizha redu, ndiyo furakisi. Zvichida kutora hunyoro uye usanamatira kumutumbi munguva yezhizha iva nechokuita nazvo. Kana tichida yakasununguka uye nyowani dhizaini, yerineni inova mubatsiri mukuru.
Femu yeSpain yakabheja zvese pamucheka mwaka uno; kana, zvinenge zvese. Akazviita mumatoni echisikigo, asi zvakare mu girini uye mataira ematani sezvakaratidzirwa mupepeti nyowani. Makara ayo iwe aunogona zvakare kusanganisa pasina kusara.
1 Baggy mapatani
2 Adolfo Dominguez's yepamusoro
Iyo yakasununguka mapatani eiyo itsva Adolfo Domínguez muunganidzwa inokupa iwe kunyaradzwa ino zhizha. Iyo midhi kupfeka ine kuvhara bhatani uye mandarin collar inozoita mubatsiri mukuru kana iwe usingazive chekupfeka. Saka zvichaitawo bermuda zvikabudura nejekete rine maxi muhomwe; mbatya mbiri idzo femu dzinosanganisira mune zvese zvevarume nevakadzi muunganidzwa.
Iyo zvakare inoratidza baggy pateni pane iyo tiravara bhurugwa izvo zvaunogona kuona mumufananidzo uyu. Yakakwira-kukwira, ine zip uye kuvhara bhatani, iwe unogona kuisanganisa nenzira dzakawanda uye dzakasiyana kwazvo, seyakasimba inotiratidza mune ino edhisheni.
Adolfo Dominguez's yepamusoro
Iyo yepamusoro crossover ndicho chidimbu chinotyisa kwazvo mune ino muunganidzwa. Ruvara mataera ne tsananguro yeuta uye asymmetric neckline Hatifunge kuti zvinokutorera nguva yakareba kuti uzvipedze. Iyo haidi inosanganiswa pamwe nebhurugwa remuvara mumwe chete uye bhachi mune yakasikwa machira. Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira dzakashinga, zvisinei, iwe unongofanirwa kufemerwa nemaitiro eiyi edhisheni uye uipfeke pamusoro pe t-shirts kana majaketi.
Iwe unofarira here zvitsva zvaAdolfo Domínguez?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Adolfo Dominguez anopa imba nyowani yekutsikisa: El lino
3 marudzi ehukama hune chepfu kutiza kubva